Global Voices teny Malagasy » Iran: Fampitam-baovao eo ambany famoretana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Desambra 2018 3:25 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tsidika
Nanamafy ny famoretany ny fampitam-baovao Iraniana ny manampahefana Iraniana. Voarara  ny 3 Jolay 2007 ny gazety mpanohana ny reformista Ham Mihan  (Mpiray tanindrazana).
Naato vonjimaika ihany koa ny masoivohom-baovaon'ny mpiasa iraniana, Ilna , izay nitatitra ny vaovao momba ny fitokonana sy ny korontana tany amin'ireo oniversite ary nametra-pialana ny taleny.
Nalahelo  i Jomhour fa ho andro tsy hisy Ham Mihan (rahampitso), gazety matotra, mandefitra ary be herimpo izay nanakiana ny toeran'ny governemanta. Nohidiana noho ny baikon'ny manampahefana Iraniana izany .
Nanambara  ny fikatonan'ireo gazety mitohy ao Iran i Hanif, ary nilaza fa efa zatra mihaino an'ity karazana vaovao ity kanefa mbola gaga ihany raha nandre fa norarana i Ham Mihan.
Nilaza  i Ghomaar fa raha misy gazety iray maharitra mihoatra ny herintaona eto amin'ity firenena ity dia ho gaga ianao. Tsy maharototra ny gazety voarara eto. Nampahatsiahy antsika izy fa eo ambany famoretana ihany koa ny Ilna . Niova ny fitantanana azy ary azo antoka fa hakatona ihany koa izany.
Maryam Sheybani, mpanao gazety iray nanoratra ho an'ny Ham Mihan dia nilaza  hoe “tena sarotra tokoa ny manao veloma ity gazetinay ity. Vao in-43 nivoaka izahay – saingy niezaka mafy izahay mba tsy hitovy amin'ny hafa. Nahomby ny nataonay, ary izany no antony tsy naha-zakana anay ary nakatona.
Nilaza  i Varesh niaraka tamin'ny fanesoana, fa tsara kokoa raha sigara fotsiny no amidin'ny mpivarotra fa tsy gazety. Tsy hisy olona hanasazy anao hoy izy mba hampifoka sigara olona .
Nilaza  i Sanjaghak hoe: nahita ny fomba nanakatonana ny gazety sy ny andro manaraka miaraka amin'ny zava-drehetra ara-dalàna ve ianao. Manontany tena aho hoe nahoana aho no mandalina ny fanaovan-gazety? Raha toa ka mahaliana ahy manokana izany, ENY, saingy tsy afaka hiantehitra amin'izany ho asa maharitra aho.
Namoaka  ny sarin'ireo gazety marobe voarara i Mahjad. Nilaza ity bilaogera ity fa te-hanery ireo mpanao gazety sangany sasany ny governemanta hiala amin'ny fampitam-baovao satria mankahala ny olona mieritreritra sy mampieritreritra ny hafa ny Repoblika Islamika.
Nilaza  ny View from Iran fa ireo fanontaniana voalohany apetraky ny olona aminy any Andrefana rehefa fantatr'izy ireo fa avy any Iran izy dia ny hoe:
Anthony Loewstein dia mpanoratra sady bilaogera izay vao avy nankany Iran mba hijery ny fomba fijerin'ny Iraniana momba ireo olana samihafa. Mamaky isika ao amin'ny bilaoginy hoe :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/14/131907/
 Ham Mihan: http://en.wikipedia.org/wiki/Ham-Mihan
 Mamaky isika ao amin'ny bilaoginy hoe: http://antonyloewenstein.com/blog/2007/06/20/postcard-from-iran